Home» » 24
>Fashion and Grooming>
अमेरिकाका एक व्यक्तिले आफूलाई जन्मदिने आमा अन्ततः फेला पारेका छन् । तर उनी त्यतिबेला चकित परे, आफूलाई जन्मदिने आमाको दाह्री सेतै फुलेका रहेछन् । दाह्रीयुक्त महिलाको नाउँले प्रख्याति कमाएकी भिभियान हृवीलर, ६२, आफ्नी आमा भएको चाल पाएपछि रिचर्ड लोरेन्क, ३३, छक्क परेका छन् । ...
बाहिरतिर भ्रमणमा निस्किएका बेला टेन्ट लगाउनु त पर्छ नै तर गाडिएका टेन्टहरु पारदर्शी नहुने हुनाले बाहिरी दृश्यको मजा लिन पाइँदैन । यस्तो किसिमको चिन्तामा डुब्नु भएको छ भने अब त्यसको समाधान निस्किएको छ । पछिल्लो समयममा "बबल टेन्ट" चर्चामा आउन थालेको छ । ...
आफ्नी छोरीले आफूखुसी बिहे गरी भाग्न खोजेपछि एक रुसी आमाले प्रहरी अधिकारीहरुलाई आफ्नी छोरी सुसाइड बम्बर भएको भन्दै तिनलाई पक्राउ गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । ...
संसारभर अनौठा सुन्दरी प्रतियोगिता हुन्छन् तर मिस माफिया २०१० ले त सबैलाई उदेकमै पारिदियो । यसमा भाग लिने निर्ण्ाायकहरुले पनि डर्राई-डर्राई कुन चाहिँ सुन्दरी प्रथम भइन् भनी निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने स्थिति आयो । किनभने, मिस माफियाहरुले विभिन्न किसिमका कला पर््रदर्शनी गर्दा गोली हान्ने कला पनि पर््रदर्शन गर्दा निर्ण्ाायकहरुको सातो जानु स्वाभाविक नै थियो । ...
ट्रक बेच्ने एउटा वितरकले अनौठो तरिका फेला पारेका छन् । उनले हालै गरेको एउटा विज्ञापनमा आफ्नो पसलबाट ट्रक किन्दा एउटा एके ४७ राइफल सित्तैमा दिने बताएको छ । ...
Sayami's poetic fancy
Theater in his blood
“Theater is not justapassion, it’saway of life, the way of being andaway of thinking for me,” shares playwright Bijay, also known as “Bisphot”. ...
Invitation To Party Courtesy San Miguel
Subedi's unforgettable accounts
Upgrade On Digital Security: Kaspersky Anti-Virus 2012 and Kaspersky Internet Security 2012
Houses of Celebrity
Data 16 - 30 of 2875 [Total 192 Pages]